Fanofanana sy asa: mila tanora ny sehatra rehetra | NewsMada
Fanofanana sy asa: mila tanora ny sehatra rehetra
Nanokana fotoana momba ny fanofanana sy asa, omaly, ny Alliance française, nafantoka tamina lohahevitra « Fahaizan’ny tanora malagasy ». Nasaina nandray anjara tamin’izany ny tale jeneralin’ny BNI Madagascar, Alexandre Mey, nitondra ny fijeriny. « Harena lehibe fananan’i Madagasikara ny fahamaroan’ny tanora. Misongadina izany amin’ireo tanora mpandraharaha eto an-toerana na ivelany », hoy i Alexandre Mey. Ho an’ny tale jeneraly, Alexandre Mey, fotoana iray iny nahafahana naneho fa mila tanora tokoa ny toekarena malagasy.
« Tsy miankina amin’ny taona ny lanjan’ny zava-bita ary hita fa ny tanora iray manana fahafahana manafaingana ny asany noho ny fahaizany ary ny safidiny mampitombo hatrany ny fahaizany », hoy izy. « Ankoatra ny fifantohana amin’ny asa iray, eo koa ny fitiavana izay atao sy ny kolontsaina manome lanja ny asa ». Ireo no hita mampiavaka ny tanora iray, araka ny famelabelaran-kevitra nataon’ny tale jeneraly, Alexandre Mey.
Nasian’ny tale jeneraly fanazavana ny politikan’ny BNI Madagascar momba ny mpiasa ao aminy. Betsaka ny fandraisana ireo vao mianatra asa sy ireo vao manomboka miasa, ny taona 2016. Ahafahan’ny tsirairay misafidy izay asa mifanandrify aminy ireo karazana sehatra asa rehetra misy ao amin’ny banky, araka izay fianarana nataony sy ny fahaizany. Hita ao amin’ny fianakaviamben’ny mpiasan’ny BNI Madagascar avokoa ireo. Najoro rahateo, taona 2016, ny masoivoho iray ho fanohanana ireo vao miditra. Azon’ny rehetra atao tsara manomboka izao ny mihevitra hiditra ao amin’ny BNI Madagascar.